Demo Blog With Map | HimiloNetwork
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 9 Views
MUQDISHO (HN) — Masjidka Weyn ee Xaramka Makka ayaa ugu dambeyntii soo kordhiyay kaashi-robot ah oo xujeyda Muslimiinta ah ka caawinaya inuu kaga jawaabo su’aalaha diiniga oo ay rabaan. Waxaase kasii yaab badan inuu kuugu jawaabi karo 11 afaf ama luqado ah haddii aad su’aal weydiiso. Robot wuxuu xujeyda uga jawaabaya weydiimaha la xiriira fatwooyinka, acmaasha xajka iyo wixii la ...
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 6 Views
MUQDISHO (HN) — Shiikh iyo Baadari ayaa isu-taagaya inay caawiyaan darbi-jiifta ku nool magaalada Sao Paulo – iyaga oo ku gaaf-wareegaya degmooyinka magaalada si ay cunnooyin bisil u siiyaan. Waxaa horboodaya wadaad lagu magacaabo Rodrigo Jalloul iyo baadari la yiraahdo Júlio Lancellotti oo labaduba caan ka ah magaalada. Kulankoodu wuxuu kasoo bilowday kulan diimeed dood ah oo loogu qabtay muuqbaahiye ...
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 8 Views
MUQDISHO (HN) — Ruugcadaagii kubadda cagta xulka Qaranka Cameron, Patrick Mboma ayaa qaatay diinta Islaamka – isaga oo la baxay magaca Abdoul Djalil Mboma gudaha Masjid ku yaalla magaalada Douala. Muuqaallada lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya laacibkan oo shahaadada loogu qabanayo Masjidka Bonamosadi. In kasta oo Mboma uusan si furan uga hadlin qaadashadiisa Islaamka, haddana wuxuu bartiisa kula wadaagay muuqaallo ...
Himilo May 16, 2022	Leave a comment 21 Views
Himilo May 10, 2022	Leave a comment 18 Views
MUQDISHO (HN) — Jamaacada Masjid ku yaal Leida, dalka Spain ayaa Imamkooda kaga yaabsaday siin ama hadyad ah gaariga nuuca Audi-6 ah oo ay ugu abaalgudayaan dadaalkii iyo howshii adkeyd oo uu ka qaatay intii lagu jiray bisha Ramadaan. Osama Bounasab, oo ah Imamka Masjidka Al-Rahmah ee Tarka ayaa helay abaalmarinta maalintii Ciidda. “Maanta waa maalin ii gaar ah; waa ...
Muslimiin xarun samafal u sameeyey daryeelka Bukaannada Danyarta ah.
Himilo May 10, 2022	Leave a comment 10 Views
MUQDISHO (HN) — 20 sannadood kahor qoolad yar oo lagu bixiyo adeeg caafimaad ayaa hadda awoodaysa inay sannad kasta u fidiso adeeg lacag la’aan ah kumaankun dad ah oo kala diimo iyo qowmiyado ah. Jeedaalinta baahida caafimaad ee jirta, Fowsia Ahmed waxay sannadkii 2004 hirgelisay xarun bulsho iyo kaalmo caafimaad oo dadka ayaanka liita siinaysa daweyn iyo la-talin caafimaad. Sannadkii ...
Himilo May 10, 2022	Leave a comment 32 Views
MUQDISHO (HN) — Saaxiibadii iyo ehelkii ay ka dhalatay waxay wali ugu yeeraan EKratine laakiin marwalba oo usoo daadagto waddooyinka magaalada iyada oo xiran xijaab magaceedu wuxuu isku beddelaa samiiro. Kanina waa shaqsiga ugu muhiimsan nolosheeda oo fure u ah fahamkeeda Islaamka iyo kamid noqoshadeeda bulshada Muslimka ah. Magaciisuna waa Yoonis – dhalashadiisuna waa Soomaali. Balse halkee ayay iska barteen ...
Himilo May 8, 2022	Leave a comment 18 Views
MUQDISHO (HN) — Waa laba isku baahan. Midna waa lugo la’aan; kan kale waa gacmo la’aan. Laakiin sheekadoodu kuma saabsana naafanimadooda. Waxay la xiriirtaa iskaalmayntooda iyo sida cajiibka leh oo ay isku dhammeystirayaan marwalba oo ay wax qabsanayaan. Faabiyaan waa gacmo laawe aan waxqabsan Karin – Juliusna waa lugo laawe aan socon Karin ama aan gaari Karin meelaha ka korreeya. ...
Da’yarta Sawirada ku qaada Bartanka Waddada.
Himilo May 7, 2022	Leave a comment 15 Views
MUQDISHO (HN) — Halkani ma ahan meel uu galbis ama shil ka dhacayo. Waa goob loogu tala-galay in sawiro qurxoon oo soo jiidashado leh looga qaado keli-keli iyo lammaane intaba dadka jecel in ammintooda farxadda leh kaameraddu u qabato. Cabdirizaq Maxamed Cabdirahman waa helaha hal-abuurkan. “Munaasabad walba sida sagootin, galbis, dhalasho iyo wixii la halmaala ayaanu halkan ugu sameynaa dadka ...
Damaashaadka Xeebta Liido iyo Da’yarta Caasimadda.
Himilo May 5, 2022	Leave a comment 23 Views
MUQDISHO (HN) — Xeebta Liido waa mid aad u ballaaran. Waxay dhabarka ku heysaa dekaddii hore ee Duqda. Waxaana hareeraha kaga yaalla xarumo kala duwan oo laga helo cunnooyin fudud iyo fadhi. Dad badan oo dalka iyo dibaddiisa ku nool ayaa jecleysta inay yimaadaan halkan. Xasan Goodax oo galabta ku shaahaya xeeliga badda ayaana kamid ah. “Maanta way iiga duwan ...
Laacibka Kiriket-ka South Afrika oo qaatay Islaamka.
Waardiye Masjid oo – si uu u caawiyo dalxiisayaasha – iskiis isku baray 7 luqadood.
Caruus webi kasoo badbaadiyay wiil ku dhacay
Angela Merkel: Jarmalku wuxuu noqon doonaa dal Islaami ah
Muslimiinta Sheffield oo doonaya in loo helo ‘xabaalo dheeraad ah.